Ọmụmaatụ dị ike nke otu esi eji teknụzụ mgbanaka ekwentị mkpanaaka iji kwalite ahịa azụmaahịa | Martech Zone
Ulo oru ole na ole na-eji ohere a na-amatabeghị nke ijikọ teknụzụ mgbama n'ime ngwa ha iji bulie ahaziri onwe ya na ohere nke imechi ọrịre ugboro iri site na iji ịbịaru nso na ọwa ahịa ọdịnala.
Ọ bụ ezie na ego teknụzụ beacon bụ ijeri US $ 1.18 na 2018, a na -atụ anya iru ahịa US $ 10.2 ijeri site na 2024.
Ahịa teknụzụ Beacon zuru ụwa ọnụ
Ọ bụrụ na ị nwere azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-azụ ahịa, ị kwesịrị ịtụle ka teknụzụ mgbama ngwa nwere ike isi baara azụmahịa gị uru.
Ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ airụ airụ na nnukwu ọdụ ụgbọ elu bụ ụfọdụ azụmaahịa nwere ike iji mgbama mụbaa ịzụrụ ihe, nleta na nlegharị anya site na ịre ndị ahịa nwere ike ịbịaru nso site na ngwa ha.
Mana tupu anyị eleba anya ka azụmaahịa nwere ike iji teknụzụ a mụbaa ahịa, ka anyị kọwaa ihe teknụzụ mgbama bụ.
Mgbama bụ nnyefe ikuku nke nwere ike izipu data mgbasa ozi na ọkwa na ngwa dị na ekwentị n'ime oke mgbama. Apple webatara iBeacon na iPhones ha na 2013 na ekwentị mkpanaaka nke gam akporo soro ụzọ na Google wepụtara EddyStone na 2015.
Ọ bụ ezie na a na -akwado Eddystone naanị na gam akporo ugbu a, enwere ọba akwụkwọ mepere emepe na -akwado teknụzụ mgbama ngwa na gam akporo, na -eme gamut nke gam akporo na ndị ọrụ iOS ahịa.
Ka mgbama wee rụọ ọrụ, ọ dị ha mkpa ka ha na onye na -anabata ihe (smartphone) kwurịta okwu yana ngwa ewepụtara nke ọma iji ghọta na ijikwa mgbama na -abata. Ngwa ahụ na -agụ ihe nchọpụta pụrụ iche na smartphone nke ejikọtara na mgbama maka ozi ahaziri ka ọ pụta.
iPhones nwere teknụzụ mgbama agbakwunyere na ngwaike, yabụ na ngwa mkpanaka ekwesịghị ịdị na -arụ ọrụ iji na -ekwurịta okwu. N'elu ikpo okwu nke gam akporo kwadoro, ngwa ga na-arụ ọrụ na ekwentị iji nata akara mgbama, opekata mpe dịka usoro ndabere.
Ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ngwa nke enyere mgbama bụ CVS, McDonald's, ụzọ ụgbọ oloko, KFC, Kroger, Uber, na Disney World.
Kedụ ka aga -eji teknụzụ mgbama ngwa maka ire ahịa?
Nnukwu uru nke teknụzụ mgbama app bụ ohere iziga onyinye na ozi ahaziri iche nye ndị ahịa nọrịrị nso. Mana enwerekwa akụkụ nyocha ejiri iji nweta nghọta ndị ahịa nke ọma gbasara akparamagwa ịzụ ahịa iji bulie ịdị irè nke atụmatụ azụmaahịa.
Ihe Nlereanya 1: Ziga Onyinye Dabere na Ọnọdụ Ebe E Si adọba ụgbọala
Enwere ike ịhazi ahịa nke ọma ebe ọ bụ na mgbama ahụ nwere ike ịchọpụta ngwa ahụ ma mara na onye ahịa nọ ya nso, yabụ na -eme ka ọ dị oke mkpa ma dịkwa mma ileta ụlọ ahịa ahụ.
Ozugbo onye ahịa nwere ike tinye ngwa etinyere maka ụlọ ahịa dị nso na -adọba n'ime ebe a na -adọba ụgbọala, ha nwere ike nweta ngosi nke ego dị naanị mma maka taa yana tinyekwa ekele nkeonwe.
Site n'ime nke a, ụlọ ahịa ahụ ka mepụtara 1) mmetụta nnabata yana 2) ịdị ngwa nke onyinye pụrụ iche naanị dị mma maka 3) obere oge. Ndị a bụ ABC mgbanwe ntụgharị na teknụzụ mgbama dị nnọọ kụrụ isi atọ niile na -enweghị aka mmadụ ma ọ bụ ọnụ ahịa ọzọ. N'otu oge ahụ, ohere nke ntụgharị mgbanwe zụrụ nke ukwuu.
Target bụ otu n'ime ụlọ ahịa na -ere ahịa na -eji teknụzụ mgbama yana ngwa Target ịkwanye ọkwa nye ndị ahịa ha n'ofe mba ahụ. Ndị ahịa ga -enweta ihe ruru ọkwa 2 kwa njem ọ bụla ka ha ghara imebiga ozi na mgbahapụ ngwa. Ndị na -azụ ahịa ngosi ga -enweta bụ onyinye pụrụ iche na ihe na -ewu ewu na soshal midia maka mkpali onye zụrụ ahịa.
Ọmụmaatụ 2: Nweta nghọta gbasara akparamàgwà ịzụ ahịa
Ọ dịla anya amaara na ọ dị mkpa ebe ị na -etinye ngwaahịa a n'ụlọ ahịa, dị ka itinye swiiti ozugbo na ọkwa ụmụaka site na ndekọ, na -enye ụmụaka ohere zuru oke ịrịọ maka ịzụta swiiti.
Site na teknụzụ mgbama ngwa emeela ka nghọta gị ruo 11. Ndị na -ere ahịa nwere ike soro omume onye ọrụ wee nweta maapụ nke ụzọ onye ahịa ọ bụla si aga ahịa, yana ozi ebe ọ kwụsịrị, ihe zụrụ, na oge ụbọchị. ụlọ ahịa.
Enwere ike iji ozi ahụ megharịa ngwa ahịa iji bulie ahụmịhe ire ere. A na -egosipụta ihe ndị ka ewu ewu na ụzọ ewu ewu.
Tinye maapụ ụlọ ahịa na ngwa ahụ na ohere onye ahịa na -achọta ọtụtụ ihe ịzụta ga -ebu ibu.
Storelọ ahịa akụrụngwa Lowes tinyere igwe mkpanaka ekwentị n'ime ngwa mkpanaka Lowe iji melite ahụmịhe ndị ahịa. Onye ahịa nwere ike chọọ ngwaahịa wee hụ nnweta ngwa ahịa yana ebe ihe dị na maapụ ụlọ ahịa.
Ego agbakwunyere nke gụnyere mgbama na ngwa bụ na ọ na -abawanye ọnụọgụ ndị ọrụ ngwa, ohere ịre ahịa n'ịntanetị, yana njikọ aka niile.
Nlereanya 3: Nhazi nke onye ahịa dị elu
Azụmaahịa Ecommerce na -enyela ahụmịhe ịzụ ahịa nkeonwe. Ha nwere ike ime nke a dabere na nsuso dị elu nke etinyere na ịntanetị. Ịkwesighi ịbụ onye na -azụ ahịa na Target maka Target ịmara ihe na -amasị gị. Ha nwere ike zụta ozi a na Facebook na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Maka azụmaahịa brik na ngwa agha, nke a nwere ike isi ike mmejuputa. Ọ bụ ezie na ha nwere ndị enyi na -ere ahịa nwere ike ige ntị na ịnyagharịa ịzụrụ ihe, ha maara naanị ihe onye ahịa gwara ha.
Site na teknụzụ mgbama ngwa, ụlọ ahịa brik na ngwa agha na-enwe ike ịbanye na nchịkọta data siri ike nke nsuso na nyocha nke naanị ecommerce na-eji.
Site na mgbama na ngwa na -akparịta ụka, onye ahịa nwere ike ịnweta onyinye ahaziri iche, Kupọns na ndụmọdụ ngwaahịa dabere na omume ịzụ ahịa gara aga.
Ịtinye nsuso ọnọdụ n'ime ụlọ ahịa nwere ike ime ka ngwa mara kpọmkwem ebe onye ahịa nọ ma tinye ndụmọdụ na onyinye dabere na nke ahụ.
Cheedị ka onye na -azụ ahịa na -agagharị na ngalaba uwe. Mgbe ha na -abanye na ngalaba jeans, ha na -enweta ọkwa mkpọsa na 25% gbanyụọ coupon dị mma maka njem ịzụ ahịa iji zụta otu uwe ogologo ọkpa. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ha tụrụ aro otu ụdị ire ere taa, dabere na ịzụrụ ihe ndị gara aga.
Mmejuputa Beacon bụ itinye ego na teknụzụ azụmaahịa dị ọnụ ala
Dịka anyị kwuru na mbido akụkọ a, teknụzụ mgbama na -adabere na nnyefe (mgbama), nnata (ama) na ngwanrọ (ngwa).
Mgbama mgbasa ozi abụghị ịzụrụ ọnụ dị oke ọnụ. Enwere ọtụtụ ndị na -emepụta mgbama, dị ka Aruba, Beaconstac, Estimote, Gimbal, na Radius Network. Ọnụ ego ahụ dabere na mgbama mgbama mgbama, ndụ batrị, yana ihe ndị ọzọ na-enwe nkezi mkpọ 18 nke mgbama mgbago ogologo site na Beaconstac nkezi $ 38 kwa mgbama.
Onye nnata (smartphone) bụ akụkụ kachasị ọnụ nke usoro a, mana ọ dabara nke ọma maka ndị na -ere ahịa na ndị ahịa ha nwere ekwentị kpuchie ya. Nọmba ọhụrụ na -egosi 270 nde smartphone ndị ọrụ na United States, ọnụ ọgụgụ a n'ụwa niile dị nso ijeri 6.4, yabụ ahịa juru eju.
Ọnụ ego ịgụnye teknụzụ mgbama n'ime ngwa bụ naanị obere ego ọnụ ahịa mmepe ngwa, yabụ na ị gaghị emebi ụlọ akụ site na itinye uru dị na ngwa gị.
Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị ịnweta mmụba na ọnụọgụ ahịa gị, anyị na-atụ aro ka ị na-eleba anya n'ime ohere teknụzụ enyere mgbama mgbama na-enye azụmahịa azụmaahịa.
Teknụzụ dị ọnụ ala yana enwere nnukwu ego ịkwụ ụgwọ. Naanị ị ga -ewepụta atụmatụ ịre ahịa iji tụọ ndị na -azụ ahịa gị nnukwu onyinye na ịkatọ omume ndị ahịa ha, ị ga -anọkwa na klọb pụrụ iche nke ngwa na -enyere ndị na -ere ahịa mgbama aka.
Tags: Arubangwaọrụ mgbamaihe atụ mgbamastactiacnkà na ụzụmgbamaBeaconstacCVSụwa disneyeddystoneAtụmatụgeolocationGimbalkfcEbeengwa dabere na ọnọdụMcDonaldmobile ngwamobile mgbamakeonwenetwọk radiusịzụ ahịa nkeonweere ahịaomume ire ere ahịaịzụ ahịa omumeteknụzụ amaụzọ ụgbọ olokolekwasịrị